कोरोना भाइरस खतरनाक छ: भूक्तभोगी डाक्टरको अनुभव - Nawajagaran
कोरोना भाइरस खतरनाक छ: भूक्तभोगी डाक्टरको अनुभव
भदौ ८, काठमाडौं—चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)का एशोसियट प्रोफेसर एवं वीर अस्पतालका बरिष्ठ जनरल फिजिसियन डा. ध्रुव गैरे कोभिड—१९ संक्रमणका कारण गम्भीर बिरामी भए ।
सुरुमा उनलाई खानामा अरुचि, स्वाद थाहा नहुनेजस्ता समस्या देखिए । त्यसपछि डायरिया र बमिट सुरु भयो । १५ दिनअघि साँझ ५ बजेतिर हल्का ज्वरो आएको थियो । त्यतिखेर जाँच गर्दा ज्वरो ९९ डिग्री थियो । एक घण्टापछि चेक गर्दा क्रमसः १०० हुँदैं बढेर भोलिपल्ट विहान पाँच बज्दा १०४ डिग्री पुग्यो ।
ज्वरो एक्कासी बढेपछि डा. गैरेलाई एम्बुलेन्समार्फत वीर अस्पताल ल्याइयो । त्यहाँ रगतलगायतका आवश्यक परीक्षण गरियो । स्वास्थ्यकर्मी भएका कारण लक्षण कोभिड—१९ सँग मिल्दा जुल्दा भएपछि पिसिआर जाँच गर्दा कोरोना पोजेटिभ देखियो । झण्डै भेन्टिलेटर पुग्नुपर्ने अवस्थाबाट निको हुँदैं डिस्चार्ज हुने तरखरमा रहेका डा. गैरेले हेल्थआवाजसँग कोरोनाले बनाएको स्वास्थ्य जटिलताका बारेमा यसरी सुनाएः ए
रातमा १०४ डिग्री ज्वरो पुग्यो म वीर अस्पतालको मेडिसिन विभागको चिकित्सक । नियमित बिरामीको सेवामै खटिरहेको थिए । झण्डै १७—१८ दिनअघि सुरुमा खानामा रुचि कम हुँदैं गयो । स्वाद थाहा नहुने भयो । विस्तारै डायरिया र बमिट सुरु भयो । त्यसपछि हनहनी ज्वरो आउन थाल्यो । सुरुमा ९९ डिग्री ज्वरो थियो । भोलिपल्ट विहानसम्म ज्वरो पिकमा पुथ्यो १००, १०२ हुँदै १०४ सम्म पुग्यो ।
एकै रातमा ज्वरो यसरी पिकमा पुग्यो । विहान ३—४ बजेतिर ज्वरोले लडाउने अवस्था नै आयो । अनि त्यही बेला एम्बुलेन्स बोलाएर हस्पिटल आए । एम्बुलेन्समार्फत वीरमा पुगेपछि रगत परीक्षण गराए । कोभिड—१९ सँग मिल्दाजुल्दा लक्षण भएकाले कोभिड परीक्षण पनि गराए । सबैका रिपोर्टहरु आए ।
कोभिड—१९ को रिपोर्ट पोजेटिभ देखियो । मलाई आईसीयु चाहिने अवस्थामा भैसकेको थियो । वीरमा छुट्टै आईसीयु नभएका कारण त्रिवि शिक्षण अस्पताल ल्याइयो । शिक्षण आएपछि अवस्था झन नाजुक हुँदैं गयो ।
तेस्रो दिनमा त अवस्था यस्तो पुग्यो कि चिकित्सकरुले भेन्टिलेटरमै राख्नुपर्छ भन्ने सल्लाह गर्न थालिसकेका थिए । तर, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले तोकेका उपचारका सबै स्ट्यान्डर्ड अपनाइयो । रेम्डेसिभिर औषधि चलाइयो । प्लाज्मा थेपारी गरियो ।
भाग्य नै मान्नुपर्छ, चिकित्सकले जे—जे गर्नुपर्ने हो, समयमै गरिएको रहेछ । भेन्टिलेटरमा गैसकेपछि कोभिड—१९ का बिरामी फर्केर आएको बिरलै मात्रै छन् । मलाई कोरोना लाग्दैन् भनेर घमण्ड नगर्नुहोस् चैत्र, बैशाखतिर देखिएको कोभिड—१९ त्यति कडा देखिएको थिएन । अहिले पनि मानिसहरु त्यही सम्झेर कोरोनालाई हेपिरहेका छन् ।
तर, जसले कोरोनालाई हल्का रुपमा लिन्छ, त्यसले जिन्दगीकै ठूलो भूल गर्छ ।
हामीजस्तो युवा मान्छेलाई त यसरी सिरियस अवस्थामा पु¥यायो । मलाई अहिलेसम्म केही पनि स्वास्थ्य समस्या थिएन । न सुगर, न प्रेसर न दम नै थियो । मेरो शरीरमा क्यानुला लगाइएको यो पहिलो पटक हो ।
म आम नेपालीलाई के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको भाइरस चैत्र र बैशाखजस्तो छैन् । अहिले किटाणु एकदमै कडा र सक्रिय छ । अबका एक दुई हप्ता कन्ट्रोल गर्न सकिएन भने अवस्था भयावह हुने निश्चित छ । अहिले अस्पतालका वार्ड र आईसीयुहरु भरिभराउ छन् ।
अस्पतालमा वेडको अभाव हुँदैं गएको छ, अर्कोतर्फ अस्पतालमै राख्नुपर्ने अवस्थाका केसहरु दिनदिनै बढिरहेका छन् । डन्ट टेक इट इजी । तपाईंको जिन्दगी तपाईको आफ्नै हातमा छ । प्लीज, म बलियो छु, मलाई रोग छैन्, मलाई कोरोना लाग्दैन् भनेर घमण्ड नगर्नुहोस् । लाइफ हाम्रो हातमा छैन्, उसको हातमा छ । अ
दुई तीन हप्ता एकदमै क्रिटिकल छन् । ज्वरो आएको दुई दिनमै कडा निमोनिया निकाल्नु सामान्य कुरा होइन् । मलाई त्यो बेलाभन्दा अहिले झन डर लागेको छ । किनभने, त्यतिखेर मैले आफ्नो छातीको एक्स—रे हेरेको थिइन् । अहिले आफ्नो एक्स—रे हेरेर आफै डराए । दुई दिनको अन्तरालमा मेरो फोक्सो कस्तो भएछ । म भन्नै सक्दिन् । म केही रोग नलागेको र राम्रो इम्युनिटी पावर भएको मान्छेलाई त यस्तो भएछ ।
वृद्धवृद्धा, बालबालिका र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता नभएका मान्छेलाई मात्रैं यसले गम्भीर बनाउँछ भन्ने जुन भ्रम छ, त्यो आजैदेखि तोडिदिनुहोस् । सबैका लागि उतिनै खतरानाक छ ।
जनस्वास्थ्यका लागि हेल्थ आवाजबाट साभार